भारतले १२ वर्षदेखि सडक बनाउँदा नेपालले किन थाहा पाएन ?? – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/भारतले १२ वर्षदेखि सडक बनाउँदा नेपालले किन थाहा पाएन ??
काठमाडौँ । नेपाल भारतबीचको सीमा विवादबारे संसदको अन्र्त`राष्ट्रिय समितिले डाकेको बैठकमा भूमी व्यवस्था तथा सह`कारी मन्त्री पद्मा अर्याल अनुपस्थित भएकी छिन् । अचानक स्वास्थ्य समस्या आएका कारण बैठकमा सहभागी हुन नसकेको जानकारी गराएको समितिकी सभापति पवित्रा निरौला खरेलले जानकारी दिइन् ।
बैठकमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवले सहभागिता जनाएका छन् । उनले प्राविधिक कारणले नेपालको सम्पूर्ण भूभाग रहेको नक्सा सार्वजनिक गर्न नसकेको बताएका छन् । निकट भविष्यमा नक्सा प्रकाशन गर्ने तयारी रहको उनले बताएका छन् । बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई पनि बोलाइएको छ ।
बैठकमा सांस`दहरुले तत्काल नेपालले नेपालको आफ्नो भूमि समेटिएको नक्सा जारी गर्न माग गरेका छन् । नेकपा सांसद राम कार्कीले तत्काल नेपालले आफ्नो भूभाग समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । उनले दुई देशबीच कुटनीतिक तरिकाले छलफल गर्ने भनेर भारतले पनि बताएको उल्लेख गर्दै नेपालले आफ्नो भूभागको आधिकारिक नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
संसदीय समितिमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली : भारतको कदमप्रति हाम्रो आपत्ति छ, कुटनीतिक तबरबाट सामाधान चाहन्छौँ, नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्यमणीराज भण्डारीले भारतले १२ वर्षदेखि सडक बनाउँदा नेपालले किन थाहा पाएन भन्दै प्रश्न गरे । उनले ‘अहिले गुगल स्याटेलाइटबाट सबै देखिन्छ, जनतालाई कति उल्लु बनाउन खोजेको ?’ भन्दै प्रश्न गरे ।